Search မြနမမာ - GenFK.com
မြိုသားနဲတော့သူ တကယ်ချစ်စစ်ပေရင်ညာပါတယ် အော်လှိုင်ပေါ်က မိန်မမျာ
14 Sep 2017 · 97 views
Trailer: 'Mission: Impossible — Fallout'
Tom Cruise is inafree fall in the latest trailer for 'Mission: Impossible — Fallout.' Watch:
16 May 2018 · 19K views
8 Jun 2017 ·3views
ဟ...လို..... အိမ်မှာရှိတယ်.... ဘာပြောမလဲ.... ပြောလေ. .... အခု မိန်မမှာ....ရှိနေမယ်.... ဟုတ်တယ်လေ ....မိန်မနာမှာ ရှိနေတယ်လေ... သတိရတယ်......ချစ်ချစ်. ....... အနောက်မှာ သွားမယ်....... ချစ် ချစ်... ☎📞 ပြောလေ...... အော်.......ok. ...... ဘိုင်း...ဘိုင်း. အာဘွား...... ချစ် ချစ်..... ♥♥♥ ငယ်ချင်တို့...တစ်မျို မထင်နဲ့... နော်.... သကယ့်မဟုတ်ဘူးနော်....... Tik..... Tok. .... ဟာသ....
23 Sep 2020 · 620 views
မခွဲခင် အချိန်​လေး ရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေ ကွဲကွဲပြားပြား သိလာတဲ့အခါ အခုလိုကြည်လင်တဲ့ မျက်နှာလေး ပျောက်မသွားစေနဲ့ အဲ့ဒီလို အရွယ်အထိ နင်နဲ့ငါ သူငယ်ချင်းပဲနော် တောင်ပေါ်လို အမြင့်ကို ကြိုးစားရင်း ရောက်သွားခဲ့ရင် မြေနိမ့်မှာ ကျန်နေတဲ့ငါ့ ကိုမေ့မသွားလိုက်နဲ့ လူ့ဘဝအလွှာ ကွာပေမယ့် နင်နဲ့ငါ သူငယ်ချင်းပဲ​နော် CHO: အချိန်တန်ရင် လမ်းခွဲရမယ် လူဆိုတာ ပြောင်းလဲတတ်တယ် ဒါပေမယ့် အတူနေစဉ်တုန်းက အတိတ်ကလေးတွေကိုသိမ်းဆည်းထားရင် တစ်ချိန်ချိန် ပြန်တွေ့တော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် နင်နဲ့ သူငယ်ချင်းပဲဖြစ်နေ နေပူပြင်းအောက်မှာ ဆုံးရှုံးဖန်များ မောလာတဲ့ အခါ နင့်ကိုခင်မင်တဲ့ ငါ့ကို သတိရလိုက်ပေါ့ ရှုံးနိမ့်ချိန်မှာလည်း နင်နဲ့ငါ သူငယ်ချင်းပဲ​နော်